Xiriirkii Soomaaliya iyo Masar oo... - Awdinle Online
Xiriirkii Soomaaliya iyo Masar oo…
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdilfataax Al-Siisii oo warqadaha aqoonsiga Danjirimo ka guddoomay Safiirka Cusub oo ay dowladda Soomaaliya dhawaan u magacaawday dalkaasi.
Ilyaas Sheekh Cumar ayaa warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay Madaxweyne Cabdilfataax Al-Siisii, isagoona laga guddoomay, isla markaana waxaa dhexmaray kulan looga hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya.
Madaxweynaha Masar iyo Safiirka cusub ee Soomaaliya Ilyaas Sheekh ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeyay labada dowladood oo ku saleysan dhinacyo kala duwan, waxaana Al-Siisii uu Safiirka ugu hambalyeeyay xilka loo soo igmaday.
Labada dhinac ayaa isla gartay in la dardar-geliyo wadashaqeynta ka dhexeeysa Soomaaliya iyo Masar, iyadoona Safiir Ilyaas Sheekh uu noqon doono Safiirka dowladda u fadhin doona dalkaas, ahna Wakiilka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta.
Safiirka cusub ee Soomaaliya ee Masar Ilyaas Sheekh Cumar ayaa waxaa uu kamid ahaa noqday 12 Safiir oo bishii Janaayo ee sanadkaan 2021 Xukuumadda xil-gaarsiinta la horgeeyay, balse dib loo soo celiyay, wallow markii dambe la ansixiyay.
Previous articleRa’isul-wasaaraha dalka Sudan oo maanta ku wajahan Sacuudiga
Next articleBooliska Puntland oo Xabsiga dhigay Sarkaal bixiyay Amar culus